Maxamed Cabdulaahi Oomaar oo diiday xilka cusub oo loo magacaabay | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Maxamed Cabdulaahi Oomaar oo diiday xilka cusub oo loo magacaabay
Wasiirkii hore ee gaadiidka iyo Duulista Hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Oomar ayaa diiday inuu noqdo wasiirka cusub Wasaaradda wasaaradda Shaqada iyo Arrimaha bulshada oo loo magacaabay.
War uu soo saaray ayuu ku sheegay in uusan diyaar aheyn in uu qabto xilkaasi cusub ee loo magacaabay.
“Waxaa sharaf ii ah in April 11 2021 la Ii magacaabay wasiirka Shaqada iyo Arimaha Bulshada. Wasaaraddan oo aad muhim u ah waxay u baahan tahay Wasiir dardar geliyo howlaha baaxadda leh ee Ka socoda wasaaradda.
Maxamed Cabdulaahi Oomaar oo diiday xilka cusub oo loo magacaabay was last modified: April 13th, 2021 by Admin
Akhriso:-Cabdiraxmaan Cabdishakuur Al-shabaab ka darran ayaa ka soo muuqata Soomaaliya